> Resource > Lugood > Sida loo Xulo Soo Celinta Photos ka kaabta Lugood
Miyuu gurmad Lugood photos on iDevice ah?
Jawaabtu waa HAA. Haddii aad weligaa soo celiyay aad iPhone, iPad ama iPod xiriiri kaga imaanayo Lugood, waad ogaan kartaa. Marka aad u hagaagsan aad iDevice la Lugood, waxa ay abuuri doonaan gurmad ah si toos ah u qalab aad, oo cusboonaysiisay mar kasta oo marka aad u hagaagsan. Waxaad soo celin karaa gurmad ay u qalab aad ka dib markii aad u baahan tahay, laakiin aad u baahan tahay in la soo celiyo mid ka mid ah oo dhan oo la siiyo ilaa xog jirta ee ku saabsan qalab aad. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad leedahay oo keliya doonaa nuxurka gurmad ah oo ku saabsan qalab aad ka dib markii .Wadashaqayntaas ah. Sidoo kale, ma waxaad ku eegaan karo ama eegista soo kabsado qayb ka mid ah xogta. All ama waxba, taasi waxa weeye waxa Lugood ha karo aad sameyn.
Sida loo eegista soo kabsado sawiro ka gurmad Lugood
Lugood ma ogola in aad ku eegaan waxa ku jira gurmad ah, iskaba daa qaadan xogta ka soo baxay waxaa ka mid ah. Maxaanu samaynaa haddii aan dhab ahaan doonayaan in ay ku eegaan ceshan sawiro oo kaliya laga gurmad Lugood? Waxaad u maamuli kartaa, kaliya waxay u baahan yihiin gurmad ah Lugood shawladda sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) . Software kuu oggolaanayaa in aad ku eegaan dhammaan faahfaahinta in gurmad Lugood ee file, oo aad u eegista soo kaban karto, wax kasta oo aad rabto in aad ka. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay ku siinaysaa version maxkamad. Waxaa gebi ahaanba bilaash ah si aad u hubiso ku eegaan iyo gurmad Lugood ee content. Download version maxkamadda hoose oo lacag la'aan ah hadda!
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka on your computer, aynu hubi sida ay u shaqayso si loo soo celiyo sawiro ka gurmad Lugood. Labada versions of software ha aad shaqada oo dhan sameeyaan in 2 talaabooyinka, iyo geeddi-socodka waa isku mid. Next, aynu qaadan version Windows sida tusaale.
Tallaabada 1. Warbixiinta Lugood gurmad u previewing
Sida xaqiiqadu, Wondershare Dr.Fone ee macruufka aad bixisaa laba siyaabood inuu ka soo kabsado xogta laga qalab macruufka ah: si toos ah uga soo kabtaan qalabka macruufka iyo soo celin gurmad ka Lugood. Photos saaro kaga imaanayo Lugood, waxaan u baahan nahay in la isticmaalo hab labaad. Just guji menu on sare ee suuqa kala barnaamijka. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Barnaamijka waxaa si toos ah lagu ogaan karaa oo dhan Lugood gurmad files jira on your computer. Dooro mid ka mid ah halkaas oo aad qorshaynayso in la soo celiyo photos, iyo riix Start Scan badhanka si ay u bilaabaan soo saarida.
Tallaabada 2. Soo Celinta sawiro oo kaliya laga gurmad Lugood
Geedi socodka scan aad qaadan doonaa dhowr ilbiriqsi. Marka la joojiyo, oo aad ku eegaan karo content si faahfaahsan oo dhan. Wixii sawiro, waxaad iyaga ku eegaan karo qaybaha Camera Roll oo Photo Stream. Sax waxyaabaha aad rabto in aad halka previewing, oo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo gujinaya ku Ladnaansho button.
Fiiro gaar ah: Ka sokow photos jira in gurmad Lugood, Wondershare Dr.Fone ee macruufka sidoo kale kaa caawin kara si aad u hesho ceshan photos tirtiray (ma aha kuwa overwritten) ee file gurmad ah. Haddii aad rabto, inaad iyaga soo kaban karto, sidoo kale.